Iinkokheli zeBandla - Sikunye
Iinkokheli zeBandlaIvo Kittel2021-03-08T17:16:54+02:00
Ibandla lakho lingenza umahluko omkhulu ukuba abantwana bafikelele kwizinga lempumelelo abalidalelwe nguThixo.
Njengenkokheli yebandla, siyazi ukuba uyakholelwa ukuba ibandla ekuhlaleni liluluntu olunamandla.
Xa ujonga oko kuthethwa ngogqirha malunga nendlela akhula ngayo umntwana, xa ujonga okuthethwa y iBhayibhile malunga neentliziyo kaThixo xa kufikwa kubantwana kananjalo xa ujonga okunokwenziwa libandla lakho, wophawula ukuba kukho ithuba elingu mangaliso: ibandla lakho lingadlala indima enkulu ukuze abantwana bonke baphuhle bafikelele kwindawo uThixo abamisele yona.
Siyazi ukuba uthwele ibandla lonke apho entliziyweni yakho. Asilindelanga ukuba iinkokheli zenze wonke umsebenzi, okanye ibezizo zodwa ezixhasa iintsapho, kodwa kukhona izinto ezimele okanye ezinako ukwenziwa zinkokheli kuphela. Apha ngezantsi sibeka amabakala okanye amabanga anokuba sisikhokhelo kuwe ukukuncedisa ukuba ukhonze iintsapho ezinabantwana abaselula.
Amanyathelo Anokulandelwa Zinkokheli Zebandla
Vuseleleka malunga nendlela elinokuthi ibandla lakho lidlale indima ukunika abantwana ithuba elihle nelomeleleyo kwisiqalo sobomi. Ukuba awukaqali, sikhuthaza ukuba uqale ngokuba yinxalenye (sikhuthaza Nezinye iinkokheli ebandleni lakho) yomsitho kwiqonga le-intanethi obizwa ngokuba IBandla lethu nobomi obuselula kunye nalapho sikwajonga nzulu lombono mkhulu kananjalo nokuthi sithetha ukuthini ngokuthanda iphulo lweeNtsuku eziliWaka zokuQala.
Ququzelela ibandla lakho liqalise ukuze likwazi ukufikelela kwimisitho eyohlukileyo yoqeqesho lwakho kunye nama rhamente. Oku kukuzibophelela ekuthatheni amanyathelo amaninzi okuxhasa nokuqinisa iintsapho ezikhoyo ebandleni lakho nangaphandle usebenza ngebandla lakho.
Sebenzisa imigaqosiseko yeenkokheli zamabandla ukuze ubone amanye amanyathelo ofanele ukuwalandela. Ibandla lakho linamandla alo kananjalo lohlukile kuwo onke amanye amabandla. Ngezizixhobo ezikunceda uqalise onazo esandleni sakho, unako ukuhlola usemthandazweni ukubona okunokwenziwa libandla lakho.
Tyumba iNtshatsheli yephulo leNtsuku eziliWaka zokuQala ezaku khokhela iqela elikhoyo ebandleni lakho. Lo mntu nguye oza kusebenza naye ukuze akuphungulele umsebenzi ungenzi yonke into. U-Sikunye yena usebenza kunye nezi Ntshatsheli ukuqinisa kunye nokuxhasa umsebenzi abawenzayo ebandleni lakho ngaphakathi kanti nalowo msebenzi bawenza nalo.
Bandakanya lonke ibandla. Nceda ibandla lonke ukuba libone ukuba lingabayiyo njani inxalenye yephulo lokukhonza iintsapho. Hlola izixhobo zethu zophulo lokunceda amabandla kwiNtsuku eziliWaka zokuQala ukuze ufumane imibono.
Hlala uqhagamshelana kananjalo uxhaswa ngokubayinxalenye yemisitho yeqonga le-intanethi kunye neentlangano zethu ze Sikunye. Zigcine usazi ngoku sayina uxwebhu ukuze ufumane imbalelwano yethu rhoqo, silandele kananjalo kwiqonga likawonke-wonke lonxibelelwano kananjalo ufunde amabali enguqu aqhubeka kumabandla ohlukeneyo aphuma kulo lonke eli loMzantsi Afrika.